जिवनशैली Archives - खबरदारी न्युज
Health जिवनशैली समाचार स्वास्थ्य
के तपाई कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा चाया पर्नुको मुख्य कारण सरसफाइ हो । कपालको हेरचाह नै चायाको मुख्य कारण हो । यदी तपाईले कपालको हेरचाहमा ध्यान पुर्‍याउनु भएन भने चाया पर्ने सम्भावना हुन्छ । कपाल कम धुनाले चाया पर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । शरीरमा हुने हर्मोन परिवर्तन, वंशाणुगत गुण, टाउकोमा विभिन्न रोग, अस्वस्थकर खानपान, कपालमा केमिकलको प्रयोगजस्ता कारणले पनि चाया पर्छ ।
सुक्खा वातावरणमा बस्दा पनि कपालमा चाया पर्ने समस्या हुन्छ ।लामो समयदेखिको तनाव, थकान, चिन्ता, र टाउकोमा हुने एलर्जीका कारण पनि चाया पर्ने समस्या हुन्छ ।
चायाबाट बच्नका लागि कपालको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । यसका लागि नियमित रुपमा नुहाउनु आवश्यक छ । यसका साथै सन्तुलित भोजनले पनि चाया उत्पादनमा कमी ल्याउँछ . भिटामिनयुक्त खाना खाने, नियमित रूपमा कपाल नुहाउँने, कपालमा अनावश्यक केमिकलको प्रयोग नगर्ने गर्दा चायाको समस्याबाट बच्न सकिन्छ । त्यस्तै, स्याम्पु र तेलको प्रयोग गर्दा पनि निकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । एन्टीडेन्ड्रफ स्याम्पुको प्रयोग र सफा पानीको प्रयोगमा ध्यान दिन सकियो भने चाया पर्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
मृत्यु पछी के हुन्छ यस प्रश्नको ठोस जवाफ दिन सक्दैन सायद कसैले तर अध्यात्म र बिज्ञानले फरक फरक तर्क राख्छ । आज हामी अमेरिकी खगोलभौतिकशास्त्री, लेखक तथा विज्ञान सम्प्रषक नील डिग्रास टाइसन द्वारा अमेरिकी टेलिभिजन तथा रेडियो होस्ट ल्यारी किङ्गलाई दिएको अन्तरवार्तामा आधारित केहि अंश प्रशुत गर्दै छौं हुन त म मृत्युपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नको कुनै अखण्डनीय कुराको दाबी गर्न सक्छु । तर, हुने चाहिँ यस्तो हो : तपाईं बाँचुन्जेल खाना खानुहुन्छ । हामीले खाने खानामा क्यालोरी हुन्छ । क्यालोरी भनेको ऊर्जा मापन गर्ने एकाइ हो । तपाईं खाना खानुहुन्छ, र तपाईंको शरीरमा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । त्यो ऊर्जालाई तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
आधारभूत रुपमा भन्नुपर्दा हाम्रो शरीरको तापक्रम स्थीर रहनुको कारण नै यही हो । हाम्रो शरीरको तापक्रम हरेक समय ९८.६ डिग्री फरेन्हाइट हुन्छ ।
अब कुरा आउँछ हाम्रो मृत्युपछि के हुन्छ त ? हाम्रो मृत्यु हुँदा हाम्रो शरीरले ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्दैन (किनभने, ऊर्जा उत्पादनको लागि हाम्रो शरीरले खाना खाएको हुँदैन, खानाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नको लागि खानासँग प्रतिक्रिया गर्नको लागि अक्सिजन शरीरभित्र छिरेको हुँदैन र अक्सिजन हरेक कोष–कोषमा पुर्याउनको लागि रक्तसंचार क्रियाशील हुँदैन) । त्यसैले शरीरको तापक्रम घट्न थाल्छ । कतिसम्म घट्छ त ? वायुमण्डलको तापक्रम जति छ, त्यतिसम्म । यदि तपाईंले मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको हात छुनुभयो भने तपाईंको पहिलो प्रतिक्रिया हुन्छ, ‘शरीर त चिसो छ !’ होइन ! शरीर चिसो हुँदैन ! शरीरको तापक्रम त वायुमण्डलको तापक्रम जति छ, त्यति नै हुन्छ । तर, तपाईंको आफ्नो हात त ९८.६ डिग्री फरेन्हाइटसम्म तातो छ नि त ! मृत शरीरमा ऊर्जा उत्पादन हुने कार्य भइरहेको हुँदैन ।
शरीरका हरेक अणुहरुमा ऊर्जा सञ्चित भएर बसेको हुन्छ । मृत शरीरलाई जलाइयो भने उक्त सञ्चित ऊर्जा तापमा परिणत हुन्छ र उक्त तापले हावालाई तताउने काम गर्छ । सो तातो हावा अन्तरिक्षमा जान्छ । तर, मेरो मृत्युपछि म चाहन्छु कि मेरो मृत शरीरलाई गाडियोस् । मेरो शरीरलाई गाडियो भने मेरो शरीरका अणुहरुले जीवनभर सञ्चित गरेको ऊर्जा सूक्ष्म किटाणुहरुले प्रयोग गर्छन्; ब्याक्टेरिया तथा अन्य किटाणुहरुले मेरो मृत शरीरको ऊर्जा आफ्नो जीविका चलाउन प्रयोग गर्छन् । त्यसैले मेरो शरीर पृथ्वीकै जीवजन्तुमा फर्कन्छ । र, जीवनको एक चक्र समाप्त हुन्छ । मलाई थाहा छ कि त्यस्तो हुनेवाला छ, किनकि मेरो शरीरमा सञ्चित ऊर्जा कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हामी मापन गर्न सक्छौँ ।
तर, मेरो चेतनालाई के हुन्छ त ? अब मेरो चेतना कहिल्यै फर्किनेवाला छैन । चेतना फर्किन्छ भन्ने कुराको कुनै प्रमाण छैन । वास्तवमा अब ‘म’ नै हुन्नँ । तर, के त्यो त्यति अनौठो छ र ? आफू जन्मिनुभन्दा अगाडि तपाईंको केही चेतना थियो र ? मेरो मतलब, जन्मिनुभन्दा अगाडि के तपाईं ‘म अहिलेसम्म पृथ्वीमा किन जन्मिनँ ? मलाई पृथ्वीमा जन्म लिनु छ ! म कहाँ छु ?’ भनेर कतै बसेर चिच्याइरहनुभएको थियो र ? पक्कै थिएन । त्यो त सिर्फ गैरअस्तित्वको अवस्था थियो । तर, अब म जन्मिसकेको छु र मलाई आफ्नो अस्तित्वको आभाष भइसकेको छ । यो स्थितिमा पक्कै पनि मलाई आफ्नो गैरअस्तित्वको अवस्थाको बारेमा विचार गर्दा केही अनौठो पक्कै लाग्छ ।
हामी सबैलाई मृत्युदेखि डर हुन्छ, किनकि हामीले आफू जन्मिएको पलदेखि जीवनभर अनुभव गर्ने भनेको जीवन हो । तर यसमा म अलि भिन्न तरिकाले हेर्न चाहन्छु । यदि सम्भव हुने भए के म अमरत्व चाहन्थेँ त ? पक्कै पनि अमरत्वको बारेमा सोच्नु निकै रमाइलो हुन्छ । तर, म यसलाई यसरी हेर्छु : मेरो मृत्यु निश्चित छ भन्ने कुराको ज्ञानले नै म बाँच्नमा केन्द्रित हुन्छु, जीवनमा केही उपलब्धि पाउनुपर्छ भन्ने कुराको मलाई महसुस हुन्छ, माया व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने महसुस हुन्छ; त्यो पनि अहिले नै, पछि होइन ! यदि हामी सधैं बाँचिरहने भए बिहान ओछ्यानबाट किन उठ्नुपर्यो र ? किनकि, भोलि त सधैं आउँछ नि ! म त्यस्तो जीवन बाँच्न चाहन्न । मलाई मृत्युको डर छैन; डर छ त त्यस्तो जीवन बाँच्ने जहाँ मैले केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्थेँ, तर गरिनँ । मलाई मृत्युको डर छैन ।
टमाटरको प्रयोगले कयौं रोगको रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ ।विहान पानी नपिइकन पाकेको टमाटर खादा स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदा पुग्छ ।यदी बच्चालाई सुख्खा रोग भएको खण्डमा प्रत्येक दिन एक गिलास टमाटरको जूस पिलाउदा बिरामीबाट आराम मिल्छ ।बच्चाको मानसकि तथा शारीरिक विकासका लागि टमाटर बहुत फाइदाजनक हुन्छ ।मोटोपन घटाउनका लागि पनि टमाटरको प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रतिदिन एक देखि दुई गिलास टमाटरको जूस पीउनाले वजन घट्छ ।
गर्भावस्थामा टमाटरको सेवन गर्न बहुत फइदा हुन्छ ।यदी पेटमा जुका वा अन्य किरा भएको खण्डमा टमाटरमा मरिच मिसाएर खादा फाइदा हुन्छ ।काचो टमाटरमा कालो नून मिलाएर खानाले अनुहारमा चमक आउँछ टमाटरको गुदीलाई अनुहारमा दल्दा पनि निकै फाइदा हुन्छ । प्रयोगले कयौं रोगको रोकथाम समेत गर्न सकिन्छ तरकारीलाई स्वादिलो बनाउनका लागि गोलभेडाको प्रयोग आजभोली अनिवार्य जस्तै भएको छ । सूपको रुपमा, अचारको रुपमा तथा श्रृंगारको सामानको रुपमा समेत गोलभेडाको प्रयोग हुने गरेको छ ।
मानिसलाई वजन घटाउन पनि गोलभेडा फाइदाजनक छ । तर टमाटरको सवैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको पकाउँदा पनि त्यसको पोषक तत्व जादैन ।टमाटरको प्रयोगले कयौं रोगको रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ । विहान पानी नपिइकन पाकेको टमाटर खादा स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदा पुग्छ । यदी बच्चालाई सुख्खा रोग भएको खण्डमा प्रत्येक दिन एक गिलास टमाटरको जूस पिलाउदा बिरामीबाट आराम मिल्छ । बच्चाको मानसकि तथा शारीरिक विकासका लागि टमाटर बहुत फाइदाजनक हुन्छ । मोटोपन घटाउनका लागि पनि टमाटरको प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रतिदिन एक देखि दुई गिलास टमाटरको जूस पीउनाले वजन घट्छ । गर्भावस्थामा टमाटरको सेवन गर्न बहुत फइदा हुन्छ ।यदी पेटमा जुका वा अन्य किरा भएको खण्डमा टमाटरमा मरिच मिसाएर खादा फाइदा हुन्छ । काचो टमाटरमा कालो नून मिलाएर खानाले अनुहारमा चमक आउँछ टमाटरको गुदीलाई अनुहारमा दल्दा पनि निकै फाइदा हुन्छ ।
दाँतको पहेँलोपन हटाउन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
मान्छेको सुन्दरता दाँतको सुन्दरतासँग पनि जोडिएको हुन्छ। हामी अगाडि परेर कोहीसँग बोल्छौँ भने पहिले देखिने नै दाँत हो। गफ गर्दा या हाँस्दा दाँत राम्रो देखिएन भने राम्रो देखिँदैन। त्यसैले दाँत सफा या चम्किलो बनाउन आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि दैनिक टुथपेस्टले ब्रस गर्दैमा दाँत राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। अन्य सामान्य घरेलु चिजले पनि तपाईंको दाँत राम्रो बनाउन सहयोग गर्छ।
यी हुन् दाँत चम्काउने घरेलु उपाय : कागती र नुन सातामा दुई पटक नियमित कागतीमा नुन मिसाएर दाँतमा लगाएर एकछिन पानीले धुने गर्नाले दाँत सेतो हुनुका साथै दाँतमा किरा लाग्नबाट बचाउँछ। सुन्तला नियमित रूपमा सुत्नु अगाडि सुन्तलालाई दाँतमा नियमित लगाउनाले दाँत स्वस्थ हुनुका साथै सेता देखिन्छन्। सुन्तलामा हुने भिटामिन सी र क्याल्सियमले दाँतमा हुने किटाणुबाट बचाई दाँत सफा राख्न सहयोग गर्छन्।
तुलसीको पात तुलसीको पातलाई घाममा सुकाई त्यसलाई पिसेर पाउडर बनाएर पाउडरलाई टुथपेस्टमा मिलाएर ब्रस तथा पत्तालाई सर्स्युंको तेलमा मिलाएर दाँत सफा गर्ने गर्नाले दाँत चम्किन्छ। दैनिक स्याउ सेवन दैनिक स्याउ खानाले दाँतका लागि फाइदा हुन्छ। यसलाई राम्ररी चपाएर खाने गर्नाले स्याउमा हुने एसिड र फाइबरले दाँतलाई सफा तथा बलियो बनाउन सहयोग गर्छन्।
जिवनशैली समाचार समाज स्वास्थ्य
चिसोमा किन दुख्छ ढाड ? यसरी गर्नुहोस् उपचार
आजकल अधिकांश मानिसमा ढाड अर्थात कम्मरको दुखाइ छ । चिसो मौसममा त यस्तो समस्या झन धेरै हुन्छ । कम्मर, ढाड अर्थात् पिठ्यू जो शरीरको खम्बा हो त्यसले पूरै शरीरलाई सिधा रहन र दायाँबायाँ फर्कन सहयोग गर्छ ।
कम्मरमा हुने लचकताले नै शरीर बलियो र लचिलो हुने गर्दछ । तर अधिकाशं मानिस कम्मर दुखाईका कारण निकै असहज जीवनयापन गर्न बाध्य हुने गरेका छन् ।मेरुदण्डको दुखाइ धेरैको समस्या हो । स्पाइनमा ‘भर्टिब्रा’ भनिने हड्डीहरुको समूह हुन्छ । मेरुदण्डमा नसा हुन्छ, जसलाई ‘स्पाइनल कर्ड’ भनेर चिनिन्छ । मेरुदण्डबाट पनि हा“गाहरु फैलिएका हुन्छन् । हात चलाउने नसा र खुट्टा चलाउने नसा अलगअलग हुन्छन् । गर्धनको नसाले हात चलाउने काम गर्छ भने कम्मरको नसाले खुट्टा चलाउन मद्दत गर्छ।
यसरी कम्मर दुख्नुको मुख्य कारण भनेको मानिसको अब्यवस्थित जीवनशैली र खानपान नै हो । सामान्यतया कम्मरमा असर पर्ने काम गरेमा, धेरैबेर निहुरिएमा, अगाडि पछाडि धेरै झुकेमा, भारी सामान बोकेमा, गर्धन झुकाएर बसेमा र सुताई नमिलेमा पनि कम्मर दुख्ने गर्दछ ।
यसका अलावा एकैनासको बसाईमा सवारी चलाउँदा, मोटोपनाले नसा च्यापिदाँ, उचाई अनुसार तौल नमिल्दा कम्मर दुख्ने गर्दछ । यसरी दुख्ने कम्मर कसैको बीच भागमा त कसैको दायाँ भागमा दुख्ने हुन्छ ।
कम्मर दुख्दा खुट्टासम्म झमझम गर्ने र धेरै दुखेमा खुट्टाले टेक्न ग्राहो समेत हुन्छ ।
कम्मर दुःखाई हुन नदिन उचित आहार तथा जीवनशैली व्यवस्थित हुनुपर्छ । सकेसम्म दैनिक आधा घण्टा विश्राम गर्नुपर्छ ।
लामो समय काम गरे पछि केहिबेर आराम गर्नुपर्छ । असहज बसाईपछि हातगोडा तन्काउने तथा केहि बेर हिडडुल गर्नुपर्छ । यसो गर्नाले ढाड, पाता, गर्धन र कम्मरका नसा सिधा हुन्छन् ।
पौष महिना लागे संगै जाडो झन बढेको छ । हिमाली भेगमा हिमपात भएर जनजिवन कस्टकर भएको छ भने, तराईमा सित लहरले । सामान्य अवस्थामा मानिसहरुले जाडो मा लुगा बाख्ला लगाउने, धेरै लुगा लगाउने भन्ने गरेको पाईन्छ । तर, लुगा मात्र होईना खान पानमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । मानिसको बानी हुदैन तातो तातो खानेकुराहरु खाने । जाडो मौसम आउन साथ शरिरको तापक्रम बढाउनका लागि खाने खानेकुराले पनि कहिले काही स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्दछ । त्यसकारणले जाडो मौसममा कस्तो खानेकुरा खाने भन्ने बुझन जरुरी हुन्छ ।
जाडो मौसमा धेरै भोक लाग्दछ । भोक धेरै लाग्यो भनेर दबाउनु हुदैन । समय समयमा मात्र पुराएर खानेकुराहरु खाईराख्नु पर्दछ । विशेषत सिजन अनुसारका फलफुलहरु खादा धेरै राम्रो हुन्छ । सुन्ताला, हलुवाबेद, सखरखण्डा, गाँजार, मुला, अङगुर आदि फलफुलहरु खादा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । अझै जाडो मौसममा गाजर खाने हो भने स्वास्थ्यमा धेरै फाईदा हुन्छ । सिजनल फलफुलले शरीरमा प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउछ ।
नेपालीले खाने कुरामा धेरै ध्यान नदिएको पाइन्छ । जाडो मौसममा खाने कुरामा ध्यान नदिदा विभिन्न प्रकारणका रोगहरु लाग्न सक्दछन् । चिसो खानेकुरा खादा रुगा खोकी लाग्न सक्दछ । त्यसकारणले बासी खाना नखाने, फिर्ज गरेको खानेकुराहरु नखाने हो भने हामीहरुले जाडोमा रुघा खोकी, ज्वरो आउनबाट बच्न सकिन्छ ।
तातो पानी पिउने, तातो खाना खाने, हरियो, सगपात खाने, गेडागुडीको दाल खाने, फलफुल खाने, न्यानो भएर बस्ने, आगो ताप्नु पर्दछ ।
हाम्रो घरमा दम तथा मुटु रोगी सदस्य हुनुहुन्छ भने थप ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । मुटुका रोगीलाई धेरै चिल्लो पर्दथ खुवाउनु हुदैन् । हुनत सामान्य स्वास्थ्य भएका मानिसहरुले पनि धेरै चिल्लो राखेको खानेकुरा नखाएको राम्रो हुन्छ । विशेषत मुटु र दमका रोगीलाई चिल्लो कम भएको खानेकुरा खुवाउने, धुलो, धुवा बाट टाढा राख्ने, न्यानो बनाएर राख्नु पर्दछ । बुढा बुढिमा चुरोट खैनी जस्ता सुर्ती जन्य पदार्थहरु सेवन गर्ने बानी बढीहुन्छ । दम तथा मुटु रोगीले धुर्मपान गर्नु हुदैन् ।
भिटामिन सी प्राप्त हुने खानेकुरा खादा धेरै फाईदा हुन्छ जाडो मौसममा । जस्तै : अमिलो फलफुल, कागती, सुन्ताला, अमिलो, ब्रोकाउली, अम्बा, बन्दा, गोपी, , कटहर, सलगम, माछा, दुध, बदम आदिमा पाइन्छ । भिटामिन सी को कमिले छाला सुख्खा हुने भएकाले जाडो मौसममा अझै बढि आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
जाडो मौसममा हात खुट्टा फुटने, ओठ फुटने भएकाले नुहाएपछि शरिरमा बोडी लोसुन प्रयोग गर्ने, लिपगाड ओठमा प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । जाडो मौसममा चिसो हुन्छ भनेर मानिसहरुले पानि पिउदैन्न । त्यस्तो गर्नु गलत हो । जाडो मौसमा मन्तातो बनाएर पानी पर्याप्त मात्रमा पिउनु पर्दछ
बाल बच्च र बृद्धले जाडो मौसममा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । चिसो खाना नखाने, न्यानो भएर बस्नु पर्ने हुन्छ । झोलीलो पर्दाथ धेरै खाने, सुपहरु समय समयमा खानु पर्दछ । जुन पनि खाने कुरा देख्दा साथ धेरै खाने बानी हुन्छ त्यो गलत हो । समय समयमा खाने तर धेरै खानु हुदैन् । जाडो मौसममा तुलसी पानी, अदुवा पानी, ब्यसार पानी खादा स्वास्थ्यमा राम्रो हुन्छ ।
आरम्भ चौतारी लघुवित्त र देउराली लघुवित्तले भोलि देखि एकिकृत कारोबार गर्ने
२०७८, २९ कार्तिक सोमबार ११:५८
काठमाडौं । आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र देउराली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कात्तिक ३०…
शरीरमा पानी कम हुँदा देखापर्ने ११ लक्षण
२०७८, १२ असार शनिबार ०६:४९
भनिन्छ, पानी जीवनको आधार हो । धर्मशास्त्रदेखि विज्ञानसम्मले जीवनको उत्पत्ती पानीबाट नै सुरु भएको भन्ने तर्क…